I-12th Century Guardhouse - I-Airbnb
I-12th Century Guardhouse
Sansepolcro, Toscana, Italy
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguRay
Ngaselunxwemeni lwedolophana yentaba esemaphandleni eTuscany, le ndlu yamatye endala inendawo eyaneleyo ngaphakathi nangaphandle yokonwabela izandi zomoya, amanzi neentaka. Ngasentla kwee-acre zomhlaba oqingqiweyo phakathi kweendlela ezininzi kunye ne-Via Francigena.
Esi sakhiwo sibalulekileyo savuselelwa ngobunono ngumculi weklasiki ngeminyaka yoo-1980 ogcina imigangatho emininzi yokuqala -- kwiindawo ezingafaniyo! -- kunye nezinye izinto. Iminyaka iyenza ibe yindawo enomtsalane nefudumeleyo.
4.53 out of 5 stars from 38 reviews
4.53 · Izimvo eziyi-38
Le lali yindawo ethe cwaka ejikelezwe ziindlela zendalo ezisayiniweyo, kwi-Saint Francis Way. Ineevenkile zokutyela ezimbini ezivulekileyo ngeempela-veki okanye ngokubhukisha. Idolophu yaseSansepolcro kunye neevenkile zayo ezininzi zokutyela, iimarike zasesitratweni, iivenkile ezinkulu, iivenkile zokutya okunempilo, iimyuziyam njl. iikhilomitha eziyi-9 ukuhla. Kukho iindawo ezimbini zokubambelela amahashe ezikufutshane, enye inefama yeesile, indawo ethandwayo ngabantwana.
Uhambo losuku lungenziwa eArezzo, eCortona, eCasiglion Fiorentino, eLake Trasimeno Perugia naseGubbio lula kunye neendawo ezininzi ezincinci ezinomtsalane ezifana neAnghiari, iMonterchi neCiterna. Ezinye iindwendwe zihamba kwangethuba ukuya eFlorence okanye eSiena.
Umbuki zindwendwe ngu- Ray
Ndihlala kufutshane nendlu ibe ndingakunceda ndize ndicebise ngokuhlala kwakho ukuba uyafuna.
Ukuba uthetha isiTaliyane, uthetha iSpanish. Kwi-parle francais. Man spricht Deutsch. me redt mamaloshn
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$120